Baarlamaanka Midowga Yurub Oo Maanta Lagaga Hadli Doono Qadiyada Aqoonsiga Somaliland |
Baarlamaanka Midowga Yurub Oo Maanta Lagaga Hadli Doono Qadiyada Aqoonsiga Somaliland
Mudane ka tirsan xisbiga Konsertives-ka aqalka baarlamaanka ururka midowga yurub Nirj Deva MEP ayaa la filayaa inuu maanta oo arbaco ah horkeeno golaha baarlamaanka ururka midowga yurub qadiyadda gooni isku taaga jamhuuriyadda Somaliland.
Mudanahan ayaa ka codsan doona midowga yurub in la aqoonsado Somaliland,waxaana arrintani kusoo beegmaysaa xilli xaaladda wadamada reer galbeedku is badelo siyaasadeed ka dhacayaan.
Md Nirj Deva oo ah xubin ka tirsan xisbiga Konsertive-ka iyo kooxda dib u habaynta (Consertive and Reformist Group) ayaa ciiwaankooda ay ku leeyihiin bartas internet-ka waxay ku baahiyen in maalinta barrito ah baarlamaanka midowga yurub lagaga doodi doono qaddiyadda madaxbanaanida Somaliland,isla markaana mudanayaasha xisbiga Konsertive-ka ahi ay soo jeedin doonaan in loo aqoonsado somaliland dal madaxbanaan .
Waxa sidoo kale todobaadkan oo dhan golaha lagaga doodi doonaa qorshaha siyaasadeed ee ururka midowga Yurub ka leeyahay qaaradda Africa hase’yeeshee wafti wasiirka arimaha dibada Somaliland Dr Sacad Cali Shire hogaaminayo ayaa ka qayb gali doonaa kalfadhiga dalka Somaliland muhiimka u ah ee lagaga doodayo qaddiyadda iyo madaxbanaanida Somaliland.
Masuuliyiinta wasaarada arimaha dibada Somaliland oo aanu isku daynay inaan la xidhiidhno si aan wax uga waydiino arrinkan ayaanay noo suurto galin.